Salphina Malee Injifannoon Booji’amtuu Irraa Hin Eegamu! – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooSalphina Malee Injifannoon Booji’amtuu Irraa Hin Eegamu!
Damee Boruu: Amajjii 06, 2021
OPDOn ijaarsa kaayyoo fi akeeka qabaatee dhimma uummata bakkaan gahuuf yaaddee, bilisummaa fi walabummaa qabaattee ijaaramte miti. Abbaa aangoo humna waraana diinaa cabsee booji’e irraa akka meeshaa itti gargaaramuuf kan ijaarrate dha. Kanaafu, warra injifateef jilbeefattee hojjettee jiraachuu malee kaayyoo fi akeeka galmaan gahachuuf yaadduu fi yaaddoftu hin qabdu. Warri ishee booji’e ajjeesuu dhiisee akka lubbuun jiraattee ergamtu ayyaana argachuun kennaa guddaa dha. Obbolaa ishee kumaatamaan lakkawwaman waraana keessa turan keessatti haxaawwamani biyyoo akka nyaatan agartee jirti.
OPDOn umurii ishee guutuu TPLF irraa ajaja fudhattee amanamtuu taatee waggaa digdamii torba jiraachuun waan komachiisu hin qabu. Waan du’a irraa oolaniif gooftaa isaanii tajaajilanii jiraachuun waan irraa eegamu. Karaa biraa OPDOn ijaarsa Afaan Oromoo dubbatu malee ijaarsa Oromoo miti. Hooggantoonni fi miseensonni OPDO dhalootaan Oromoo hin taane kan Afaan Oromoo dubbatan hedduu dha. Har’a illee maqaa Oromoon warri gaala hatee gugguufaa jiru hedduun ilmaan nafxanyaa akka tahan ragaa danuun jira.
Namni tokko haqa uummata Oromoof dhaabbachuu fi mirga Uummata Oromoof qabsaa’uuf dirqama dhalootaan Oromoo tahuu qaba jedhaa hin jiru. Saba kam keessaa iyyuu dhalatanii warra qabsoo bilisummaa Oromoof aarsaa tahan fakkeenya hedduu kaasuun ni danda’ama. Karaa biraa warra Oromoo tahanii ilmaan Oromoo dhiiga dhangalaasaa oolan hedduu qabna. Rakkoo guddaan Uummata Oromoo mudatee jiru ijaarsa diinni Uummata Oromoo diiguuf gad fageessee ijaarrate kana of keessa buqqisuu dadhabuu keenya. Mukni jal’atee yoo guddate muruu malee qajeelchuun hin danda’amu. Akkuma kana ijaarsa diinni uummata keenya cabsuuf keessatti dhaabbate dhidhiibnee kan keenya godhachuuf utuu yaaluu qee’een tokkoon tokkoo Oromoo qee’ee gaddaa fi booyichaa akka tahu goonee jirra.
Galmi qabsoo bilisummaa inni duraa hadhaa diinaa saba keenya keessa jiru kana buqqisanii darbuudha. OPDOn dhukkuba xannachaa(cancer) uummata Oromooti. Namni booji’ame qaama isaa duwwaa utuu hin taane qor-qalbiin isaas booji’amaa dha. Kanaafuu ofitti amanee waan bilisa tahe tokko hojjechuu hin danda’u. Yaroo hundaa ajaja fudhachuu fi ergaa deemuu eeggata. Gooftaa malee hojjechuun cubbuu waan oole itti fakkaata. Wabiin jiraachuu isaa ajaja gooftaa dhaga’ee hojii irra olchuu dha. Ilaaala waan hawwasa keenya keessatti amma deemaa jiru. Kabinee, kaadree fi hidhataan OPDO hundi dhaqii ajjeessi jennaan haadhaa, abbaa, obboleessa, obbolettii isaa fi daa’ima, jaarsaa fi jaartii ajjeessa. Maaliif jedhee gaafachuuf hin yaadu.
Uummatni Oromoo ilmaan isaa kumaataman itti aarsaa godhee aangoo harka Wayyaanee keessa micciree baase gara OPDO dabrse. Maalif gara OPDO dabrsuun barbaachisaa tahe isa jedhuu xinxaluuf hin deemu. Waan taheefu aangoon harka OPDO galee akka sirna dimookraasii itti uummata kana ceesiftu imaanan kennameef. Haa tahu malee, OPDOn sammuu boojuun warraaqsa uummataa ceesisuu dhiiftee gooftaa haaraa tolfattee maqa OROMARA jedhuun as baate. Ijaarsi OroMara haguguu OPDOn yaroof jala of dhoksuuf yaaddee uummatte.
Waggaa sadan darban kana OPDO qabatanii of tultonni Amhaaraa fi nafxanyaa hammeenya bara baraa yaadatmuu ilmaan Oromoo irraan gahanii jiru. Warri nafxanyaa fi finxaaleyyiin Amhaaraa qabsoon Diddaa Garbummaa uummatni Oromoo gochaa jiru ammam akka jabaataa jiru hin beekan. Akkuma kana duraa gochaa turan nama tokko gaafa ajjeessan inni hafee caccabee hallayaa gala se’u. Yaroo itti siiqanii ilaalan dubbichi akka durii miti. Kanaafuu yaaddoon isaanii inni duraa fi guddaan qabsoo uummatni Oromoo gochaa jiru dhabamsiisuu irratti xiyyeefachaa jira.
Utuu qabsoo Uummata Oromoo fi Beenshaangul hin xumurre Sudaan biyyaa keenya irraa kaasuu hin qabnu jechaa jiru. Walumaa gala biyya isaanii Sudaanii kennanii biyya Oromoo fi Beenshangul irraa qubachuuf maaliif hin yaalle? Yoo kan isaan baasu tahe bareedaa jiru. Uummata Tigrayi irraa lafa fudhachuu RIB itti bobaasanii jiru. Dhuma irratti eenyu akka lafa dhabu teenyee ilaalla.
Koloneel Abiyi kan guddisee, leenjisee aangoof gahe TPLF akka tahe hundi keenya beekna. TPLF akka sammuun K. Abiyi rakkina qabuu beekaa Mumicha Ministeeraa tahee biyya akka jeequuf mudanii ofii keessaa baqatanii biyya isaanii nagaan ijaarrachuu filatan. Waggaa lamaa fi walakkaa ol yeroo uummatni Oromoo dhumu nuuf hin dirmanne. Akka Wayyaanee fi Abiyi jidduu kan foyyaa’u filannu taa’anii nutti kolfaa turan. WBOn gootummaa hiriyyaa hin qabneen waraana K. Abiyi of irraa ittisee jira. Sammuun isaa jeeqamaa waan taheef Eritrea wajjin walii galee akkuma agarru TPLF balleessuuf itti galagalee jira. K. Abiyyi maal argachuu fi hojjechuuf akka deemu namni nan beeka jedhee dubbatu nama akka isaa mataan jeeqame tahuu qaba.
Waan ifatti agarru tokko hojii finxaaleyyi Amhaaraa hojjechaafii jira. Bakka isaan ergan hundaa deema. Yoo bu’aa isaanii qabaateef waan amma har’a hojjetame hojii manaa isaan kennaniif akka tahe wal nama hin gaafachiisu. Biyya diiguun, seera cabsuun yoo finxaaleyyi Ammaaraa kan gargaaru tahe hojjeteefii jira. Garuu waan isaan gargaaru natti hin fakkaatu. Caalaattuu Impaayeerri Itoophiyyaa akka mancaatu godha malee. Kaabni Itoophiyyaa lammaffaa nagaan tokko tahee jiraachuu akka hin dandeenye ifaa dha. Kan jiddu galeessaa fi Kibba Itoophiyaa akkasuma bali’naan itti deemaa jira.
Finxaaleyyin Amhaaraa fi warri nafxanyaa harcaatuu OPDO maqaa Bilxiginnaa Oromoon akka Finfinnee keessaa badu sodaachisaa jiru. Kana irraa kan ka’e oduu kolfaa fi qaanii Shimalis Abdisaa akka Finfinnee isaanii dhiisee Finfinnee biraa ijaaruu yaadu odeessaa jira. Haadha manaa isaas isaanii dhiise baqataa haa tahuu hin beeknu. Warra gadadoo sammuun boojuu kanatti uummatni Oromoo gadduu hin qabu. Guyyaa WBO Amajjii 1, 2021 ilaalichisee haasawa gootni Oromoo, Jaal Marroon godhe dhaga’uun Oromoo hawwii bilisummaa qabuuf abdii itti hora. Eenyu dura iyyuu kan bilisoomu haanduraa Oromiyaa, Finfinne akka tahe firrii fi diinni Oromoo akka baru jala sararee hubachiifna. Nagaatti Shimalis Abdisaa, si wajjin salphannee baqachaa hin jirru. Nuti Finfinnee bilisoomte irratti Alaabaa Oromoo akka lammaffaa hin buqqaanetti gadi dhaabna!
Gadaan Gadaa Bilisummaa Oromoo ti!